यस्ताका हातमा विद्याको मन्दिर : जनता माविका प्र.अ. रक्सीले मातेर अफिसकै टेबलमा इन्तु-नचिन्तु - Birgunj Sanjalयस्ताका हातमा विद्याको मन्दिर : जनता माविका प्र.अ. रक्सीले मातेर अफिसकै टेबलमा इन्तु-नचिन्तु - Birgunj Sanjalयस्ताका हातमा विद्याको मन्दिर : जनता माविका प्र.अ. रक्सीले मातेर अफिसकै टेबलमा इन्तु-नचिन्तु - Birgunj Sanjal
यस्ताका हातमा विद्याको मन्दिर : जनता माविका प्र.अ. रक्सीले मातेर अफिसकै टेबलमा इन्तु-नचिन्तु
२० भाद्र २०७६, शुक्रबार १६:५०
काठमाडौ । अब हाम्रा बालबच्चाको भविष्य के होला ? जब विद्याको मन्दिर विद्यालयको प्राचार्य नै यस्तो हालतमा हुन्छन् । सर्लाहीको ईश्वरपुर १४ श्रीनगर मा रहेको जनता माध्यामिक विद्यालयका प्र.अ. ले विद्याको मन्दिर विद्यालयकै घोर अपमान गरेका छन् । शिक्षकको वेषका यस्तै व्यक्तिका कारण सरकारी विद्यालय ध्वस्त भइरहेको छ ।
उक्त विद्यालयका प्र.अ. राम अबशेष महतो विद्यालय समयमा नै दिउँसै रक्सीले मातेर त्योपनि अफिसकै टेबलमा सुतेको भेटेका छौ । हामीले भेट्दा उनी अचेत जस्तै थिए । रक्सीका कारण होस हवास गुमाएका उनलाई के सही, के गलत केही छुट्याउन सक्ने चेत थिएन ।
यस्तो देखेपछि हामीले यो तस्वीर त्यही बेला लिएका हौ । पछि विद्यालयका अरु शिक्षकलाई बोलाएर उनको हालत देखाइएको थियो । उनी आज मात्र हैन बारम्बार यही हालतमा रहने बुझिएको छ ।
स्थानीय सरकारले त नेपालका सरकारी विद्यालयको यो हालत देखेन । नेपालका शिक्षामन्त्रीलेपनि यो हालत नबुझेका भने हैनन् । किनकी यस्ता गुनासो धेरै आएको छ । यसैले संसारभरीबाट अब राज्यका निकायका उच्च पदस्थ सम्म पुग्नेगरी यो तस्वीर सेयर गरौँ ।